Google Pixelbook Go i5/ Go M3 Chromebook တွေကို ဈေးတန်တန်နဲ့ ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးသွားမလားရှင်? ~ The ICT.com.mm Blog
Google Pixelbook Go i5/ Go M3 Chromebook တွေကို ဈေးတန်တန်နဲ့ ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးသွားမလားရှင်?
ICT.com.mm ရဲ့ IT gadgets မျိုးစုံကို up to 63% အထိတောင် ဈေးလျှော့ရောင်းပေးမယ့် Year-End Sales ကြီးက ဇန်နဝါရီ (၁)ရက်နေ့အထိပဲနော်…
ခုလူကြိုက်အရမ်းများတဲ့ laptop တွေထဲက ပေါ့ပါးကျစ်လစ်ပြီး၊ Chrome OS အခြေခံထားတဲ့ Google Pixelbook Go i5/ Go M3 Chromebook တွေကို ဈေးတန်တန်နဲ့ ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးသွားမလားရှင်?
Google ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ Pixelbook Go ဟာ အရင်က Chrome Book တွေထက် လူကြိုက်များလာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်မားတာကြောင့် လူကြိုက်များတယ်ဆိုရင် မမှားဘူးနော်။ Design ပိုင်းမှာလဲ ပါးလွှာကျစ်လစ်ရုံမက၊ Performance ပိုင်းမှာလည်း Titan C လုံခြုံရေး chip နဲ့ Anti-virus Software က Built-in ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒေတာတွေကို လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အပြင် ICT.com.mm ရဲ့ Year-End Sales ကြီးမှာ Up to 20% ( Save up to K239,000) အထိတောင် သက်သာနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိတာဆိုတော့ မြန်မြန်ဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
Now K960,000 (Save K239,000)
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/google-pixelbook-go-m3-chromebook-black-8gb-64gb
Now K1,399,000 (Save K140,000)
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/google-pixelbook-go-i5-chromebook-black-8gb-128gb
Newer ASRock ရဲ့ အမိုက်စား motherboard တွေကို Up to 6% အထိတောင်ဈေးလျှော့‌ပေးထားတယ်နော်
Older “Nintendo နဲ့ Xbox” Gaming Console တွေကို Save K140,000 အထိတောင် သက်သာစေမယ့် အခွင့်အရေးရှိတယ်နေ